Nka na CD: ndụmọdụ na echiche kacha mma | Mmeghari ohuru Green
Compact Disc ma ọ bụ CD bụ ihe anyị jiri n'ime afọ iri nke 2000 na 2010, mana a na -ebelata ojiji ozu ya karịa. Teknụzụ dị elu na ngwa ngwa yana site na ọganihu ndị a, ị ga -ahụrịrị onwe gị n'ụlọ nwere ọtụtụ CD na -abaghị uru. Enwere ike ime ụfọdụ crafts na CD emegharịrị iji nye ya ndụ bara uru nke abụọ ma ghara iwepụta nnukwu ihe mkpofu. N'ezie, imirikiti n'ime ha na -akpọ ejiri ma ọ bụ na ịnweghị ebe ọ bụla ị ga -amụpụta ha.
Yabụ, anyị ga -arara akụkọ a ka ọ gwa gị ụfọdụ nka kacha mma nwere CD iji megharịa ya.
1 Crafts na CD
1.1 Ụgbọ elu
1.2 Ihe nwuchi nrọ
1.4 Ụwa Saturn
Crafts na CD
Ọ bụ maka imepụta ụgbọ elu ka ụmụ gị nwee ike mee onwe ha obi ụtọ ma soro ha gwuo egwu. Enwere ike ịmalite ya iji hụ onye na -aga n'ihu ma ọ bụ nwee ọ enjoyụ naanị ya. Ka anyị hụ ihe bụ isi ihe ịchọrọ iji nwee ike ịme ha:
Akwụkwọ ọcha ma ọ bụ kaadị
Mpempe ọkụ na gluu ozugbo
Na -esote, anyị na -egosi usoro dị mkpa ịkwesịrị ịme iji mepụta CD ndị a nka:
Nke mbụ, jiri CD gị dọpụta ndepụta ha na katọn dị nro wee bechapụ ha.
Jiri ihe nrịbama agba iji chọọ kaadiboodu mma.
Mgbe ị dị njikere, mado kaadị ahụ na CD. Ọ dị mkpa ka ị ghara ichefu ka ị na -akụkwa okirikiri etiti ka oghere wee dịrị.
Iji gluu ozugbo, kpoo mkpuchi plastik ahụ n'etiti etiti CD, kpọmkwem ebe oghere dị.
Gbapụta ma kechie balloon. Mgbe ahụ, tinye oghere n'ime oghere wee dị mma ịga.
Ihe nwuchi nrọ
Ndị na -ahụ maka nrọ nwere ike rụọ ọrụ dị ka amulet iji chebe ụmụaka pụọ ​​na nrọ ọjọọ. Agbanyeghị na ha enweghị ezigbo mmetụta, enwere ike ime ka ndị nta kwenye na ọ bara uru ka ha wee nwee ahụ iru ala ma nwee ike hie ụra nke ọma. Iji mee nka a, ịchọrọ ihe ndị a:
Ihe nrịbama na -adịgide adịgide
Iji mee onye na -achọ nrọ ị ga -aga nzọ ụkwụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ime ya nke ọma. Ndị a bụ isi ihe ị ga -eso:
Nzọụkwụ mbụ bụ ịkpụ otu yarn (ihe dị ka cm 15) wee kechie otu nsọtụ na azụ CD.
Mgbe ah ị ga -agafere oghere etiti na nsọtụ ọzọ nke diski ugboro ole. Ọ bụrụ na ọ dịrị gị mfe, ịnwere ike iji agịga rọba nyere onwe gị aka.
Mgbe ọ dị njikere, kesaa eriri niile mejupụtara oghere ahụ karịa ma ọ bụ obere. Ugbu a, ị nwere ike ịtọghe akụkụ nke eri ahụ e tere elu ma kegide ya na njedebe fọdụrụ.
Oge erugo ịkpa ajị. Ị nwere ike họrọ ọtụtụ agba wee jiri nwayọọ nwayọọ jikọta ha. Kwadebe yarn na agba nke ịhọrọ ka ịmalite na agịga, kechie isi n'azụ cd na oghere wee malite ịkpa akwa. Echiche bụ na agịga ahụ na -agafe n'otu akụkụ dị n'okpuru na nke na -esote n'elu ruo mgbe eriri ga -agwụ.
Tinyegharịa otu ọrụ ahụ maka agba ndị ọzọ ahọpụtara.
Na -esote, họrọ ụcha nke eri maka njedebe nke beads ga -ebu ma kwụba na CD. Kee eriri ọ bụla n'azụ ya. N'ọgwụgwụ nke ọzọ, fanye chaplet ma kechie nnukwu eriri iji gbochie ha ịdaba.
N'elu, eyịride eri abụọ, ị ga -aga site n'otu mkpanaka, wee kechie isi ya.
Dị ka mmetụ ikpeazụ, ị nwere ike jiri ihe nrịbama na -adịgide adịgide chọọ CD ahụ mma.
Nkịtị a na -agbagharị agbagharị abụghị naanị ihe ụmụaka ji egwuri egwu, kamakwa ọ na -ewebata ụfọdụ akụkọ banyere ntorobịa nne na nna. Ma ọ bụ na naanị iri afọ ole na ole gara aga, ịkwa akwa bụ otu n'ime egwuregwu ama ama ma ndị na -eto eto maara ya. Ka ọ were echefula ụzọ ochie anyị nwere ike isi jiri CD rụọ nka ndị a wee soro ha kporie ndụ. Iji mee elu, ị ga -achọ ihe ndị a:
Ihe nkwụnye plastik
Akwụkwọ mmado ọcha
Iji mee elu na -agbagharị agbagharị, anyị ga -ahụ ihe bụ usoro ị ga -eso:
Na akwụkwọ nrapado na-acha ọcha (ọ bụrụ na ịnweghị ya, ịnwere ike iji kaadị ọcha ka ọ rapara na CD), sepụta ndepụta CD, gụnyere oghere etiti, bepụ ya ma rapara ya na CD.
Jiri ihe nrịbama nwere akara na ụkpụrụ masịrị gị chọọ CD ahụ mma.
N'okpuru CD, n'etiti oghere ahụ, ị ​​ga -ejikọ gluu ozugbo.
Ọzọkwa na etiti, mana n'elu elu, ị ga -emeghachi otu ọrụ ahụ iji kpoo mkpuchi plastik.
Mgbe gluu kpọnwụrụ wee chọpụta na ejikọtara ihe niile na nchekwa, oge eruola ka ibido elu gị na -agbagharị wee malite ịkpụgharị.
Otu ụzọ isi mee ka ụmụaka na -ekpori ndụ mgbe ha na -amụ ihe bụ imepụta mbara ala Saturn site na CD ochie. Ọ nwere ike ọ bụghị naanị nka maka imegharị, kamakwa na -enyere ụmụaka aka imepụta ihe na ịchọ mma nke ime ụlọ ha. N'iji ihe emegharịgharị emegharị ụwa a, ị nwere ike nweta ọmarịcha ahaziri onwe ya yana ezi ebumnuche gbasara gburugburu. Iji rụọ ọrụ nka ị ga -achọ ihe ndị a:
Otu bọl nke polyexpan
Agba na ahịhịa
Ọzọ, anyị na -egosi gị ihe bụ isi ihe ị ga -eso iji mepụta ụwa Saturn emegharịrị emegharị:
Kewaa bọọlụ polyexpan ụzọ abụọ wee were ọkara oroma tee ọkara ọ bụla.
Mgbe agba kpọnwụrụ, Kee eriri na otu n'ime patches ka ọ kwụwa ya ma emechaa.
N'ikpeazụ, kechie ọkara ọkara mkpuchi polystyrene na CD (otu n'elu na otu na ala dị ka "sanwichi").
Site na ndụmọdụ ndị a, gị na ụmụ gị nwere ike ịnụ ụtọ obere ọrụ nka mgbe ị ga -enweta ihe ochie. Enwere m olile anya na site na ozi a, ị ga -amụtakwu gbasara ụfọdụ nka na CD.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Gburugburu » Nzughari » CD nka
Kedu ihe bụ PET
Egweri oriọna bọlbụ